Waa kuma xiddiga ka tirsan Kooxda Real Madrid ee xaqiijiyey inuu xiiseynayo u dhaqaaqista horyaalka MLS-ka Mareykanka? – Gool FM
Waa kuma xiddiga ka tirsan Kooxda Real Madrid ee xaqiijiyey inuu xiiseynayo u dhaqaaqista horyaalka MLS-ka Mareykanka?
Haaruun May 2, 2020
(Madrid) 02 Maajo 2020. Ciyaaryahan ka tirsan kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa la soo warinayaa inuu xiiseynayo inuu u dhaqaaqo horyaalka MLS-ka Mareykanka.
Xiddiga kooxda Real Madrid ee Gareth Bale ayaa shaaca ka qaaday inuu u furan yahay inuu u dhaqaaqo horyaalka MLS-ka mustaqbalka dhow.
Laacibka reer Wales ayaa si joogto ah isha loogu hayey mustaqbalkiisa garoonka Bernabeu, inkastoo kooxda La Liga ka ciyaarta lagu soo waramayo inay diyaar u tahay inay sii haysato Bale xilli uu jiro faafaha Coronavirus.
Si kastaba ha ahaatee, ciyaaryahankii hore ee Tottenham Hotspur ayaa kaliya 14 kulan saftay horyaalka Spain xilli ciyaareedkaan, waxaana uu xaqiijiyay inuu xiiseynayo inuu ku biiro koox ka ciyaarta horyaalka MLS-ka.
Isaga oo ka hadlayey The Hat-Trick Podcast, Bale wuxuu yiri: “Xaqiiqdii waan jeclahay horyaalkaa, si aad ah ayuu u kortay sanadihii la soo dhaafay.
“Markii aan imaanno oo aan ku ciyaarno kulammada isdiyaarinta xilli ciyaareedka, kulammadu waa adag yihiin, waa horyaal socda oo weli kacaya.”
“Ciyaartoy badan ayaa doonaya inay iminka yimaadaan Mareykanka, xaqiiqdii waan xiisaynayaa.” ayuu hadalkiisa ku daray xiddigii hore ee Spurs.
Gareth Bale ayaa dhaliyay 105 gool 249 kulan oo uu u saftay Los Blancos tan iyo markii uu kaga yimid Tottenham, 30-sano jirkaan ayaana arki doona qandaraaskiisa haatan ee garoonka Bernabeu oo dhacaya sanadka 2022-ka.
Tababare Quique Setien oo meesha ka saaray inay xagaagan Kooxda Barcelona dib u soo ceshanayso Neymar Jr
Kooxda Chelsea oo wadahadallo heshiis kordhin ah kula jirta mid ka mid ah Weeraryahannadeeda